Saturday August 31, 2019 - 07:34:11 in Wararka by Super Admin
Nasiib darrada jirta ayaa ah in Dad badan oo muslimiin ah aysan la socon taariikhdooda kadib markii reer galbeedka nasaarada ah ay maskaxda uga shubeen taariikh aan taariikhdooda aheyn iyo dhaqamo aan dhaqamadooda aheyn.
Sanadkan cusub ee Hijriya ayaa muslimiinta u ah bishaaraad wuxuuna sanadkan imaanayaa xilli mujaahidiinta caalamka ay guulo ballaaran kasoo hooyeen halgankooda ku aadan dib usoo nooleynta khilaafadii islaamka ee burburtay.
Muslimiinta Afghanistan sanaddan 1441 Hijriya inta lagu guda jiro ayay ka xuroobi doonaan gumeystaha shisheeye ee wadankooda duullaanka ku qaaday 13 sanadood ka hor, Muslimiinta Yemen waxaa ubilaawday kifaax iyo halgan cusub oo ka dhan ah shiicada xuuthiyiinta iyo wakiillada Mareykanka.
Sidoo kale sanadkan cusub ayaa imaanaya waqti gummaad daran ay lakulmayaan muslimiinta kunool Baarma,Turkistaanka Bari iyo Shaam halkaas oo cadowga Jinsiya kala duwan leh ay ku duuleen.
Muslimiinta Soomaaliya sanadkan cusub ee Hijriga wuxuu imaanayaa xilli ay cadaw jinsiya kala duwan leh lahalgamayaan ayna guulo muuqda ka gaareen halgankooda gumeysi diidka ah.
SomaliMeMo:Allaah waxaan ka baryaynaa in inta sanaddan 1441 Hijriyah lagu guda jiro uu dalkeena Soomaaliya nooga xureeyo gumeystaha kusoo duulay
Sawirro: Magaalada Buq Aqable Oo Si Heer Sare ah looga Ciiday Munaasabadda Ciidul Fidriga 1441.
SomaliMeMo Oo Muslimiinta Ugu Hambalyaynaysa Munaasabadda Ciidul Fidriga.
dhageyso: Xalqada 17 aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday dalka Bariga Timoor?.